Wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo mar kale ku celiyay in ay ardayda Puntland helidoonin wax shahaado ah – Radio Damal
Wasiirka ayaa mar kale ku celiyay in aysan wax shahaado ah siindoonin ardayda reer Puntland sidoo kale aqoonsanayn natiijada imtixaaankii lagu qaaday Puntland.
” Anaga weli waxaan qabnaa mab da’ii ahaa imtixaankaan shahaadiga waxay masuuliyad ka saaran tahay dowladda federalka, waxaan shahaado siinaynaa cid kasta oo kasoo qeyb gasha. Marnaba ma siinayno cid aan ka qeyb galin,” ayuu yidhi wasiirka waxbarashada.
Wasiirka waxbarashada oo la weydiiyay inay siyaasadayeen arrimaha waxbarashada, ayaa ku jawaabay,” Anaga haddii naloo sheego sabab uu arday Puntland ah oo aan ka qeyb galin imtixaanka lagu siin karo shahaado, haddaan garqaadanayaa.
Sanadki hore ayay ahayd markii sidaan oo kale ay dhacday, hase ahaatee waan waan la galay ayaa lagu dhameeyay in wasaaraddu fasaxdo shahaadada ardayda Puntland.